Momba anay - Liaocheng Kunmei Bearing Co., Ltd.
Liaocheng Kunmei Bearing Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny tanànan'i Linqing, faritanin'i Shandong, izay manana ny "Tanànan'ny bearings any Shina". Ny indostrian'ny fiterahana dia novolavolaina teto ary haingana ny logistika. Niorina tamin'ny 2001, ny orinasa dia mpanamboatra mitondra fampidirana R&D, endrika, famokarana ary varotra.
Ny orinasa dia manana tsipika famokarana mandeha ho azy maro sy fitaovana fitiliana. Misy ny matihanina R & D mpiasa sy ekipa mpamokatra mahay. Mifanaraka amin'ny haitao mandroso. Mamokatra kalitao avo lalindalina sy avo lenta marina bearings baolina, ondana bantal fitaterana, tapered roller bearings ary spherical roller bearings mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly. Fitaovana fanandramana mandroso sy fanandramana amin'ny tanana be pitsiny, fitsapana roa sosona dia midika ho fiantohana ny kalitaon'ny vokatra tsirairay, ny vokatra amidy any Chine tsara ary aondrana any Eropa sy Etazonia ary Russia, Malaysia, Singapore, India, sns. Firenena sy faritra. Derain'ny ankamaroan'ny mpanjifa.
Mandritra izany fotoana izany dia mizara bearings marika malaza an'ny mpamokatra lehibe any Suède, Alemana, Etazonia, Japon ary firenena hafa koa ny orinasa. Ny orinasa dia manana tanjaka matanjaka, karazana sy maodely feno ary tahiry ampy. Ara-potoana ny famatsiana ary misy ho an'ny mpanjifa amin'ny vidiny tsara indrindra.
Ny vokatra mitondra KM dia be mpampiasa amin'ny milina fambolena, fiara, turbine rivotra, metallurgy, fitrandrahana, solika, simika, arina, simenitra, taratasy, milina mavesatra ary indostria hafa.
"Ny fiheverana amin'ny antsipiriany, ny fikatsahana ny hatsarana" no filozofianay. Avelao hifanaraka amin'izao tontolo izao ny ezaka ataontsika. Mandresy amin'ny mpanjifa.
mamorona vokatra kalitao, serivisy amin'ny fo manontolo, mamorona tombony
firaisankina, tsy fivadihana, fisakaizana, fahazotoana, fikolokoloana
Mivelona amin'ny finoana tsara, mivoara amin'ny kalitao
Ny sehatry ny asa lehibe
ambongadiny sy fivarotana enta-maotra sy kojakoja, menaka manosotra, vokatra maotera ary vokatra vita amin'ny rubber
Ny traikefa amin'ny famokarana matihanina, ny hery dia nanatri-maso ny marika.
Kalitao azo antoka
Mamokatra vokatra avo lenta ary manome serivisy tsara indrindra.
Serivisy aorian'ny fivarotana tanteraka
Omeo mpanjifa mety kokoa serivisy.